I-AM endleleni yeDowns ye-treble - Ilanga News
Home Ezemidlalo I-AM endleleni yeDowns ye-treble
EzikaMngqithi kudala zaphumela obala ngesifiso sokushanela kwasani
UMXOLISI Macuphu weRoyal AM eshaya uqethu (owaduma ngesiBeberto) ngesikhathi iRoyal AM iguqisa iTuks ngo-3-2 kowequarter final yeNedbank Cup izolo ntambama eChatsworth Stadium, eNingizimu yeTheku.
IMAMELODI Sundowns ihlalelwe wumqansa onzima wokugudluza iRoyal AM engagayelwa mphako kulezi zinsuku
kumasemi final eNedbank Cup ukufeza amaphupho ayo okushanela zonke izicoco ezidlalelwa ngaphansi kwePremier Soccer League (PSL) kule sizini. La makilabhu aqhathwe izolo ngeSonto ukubhekana kowandulela owamanqamu ozokuba se Chatsworth Stadium, eThekwini, ngosuku olusazomenyezelwa. Enye isemi final izodlalwa yiTshakhumaTsha Madzivhandila (TTM) neMarumo Gallants. Umdlalo weSundowns ne-AM uthathwa njengowamanqamu ngaphambi kowamanqamu walo mqhudelwano njengoba womabili la makilabhu elikhulumisa ibhola enkundleni okufakazelwa wukulandelana kwawo nasesicongweni seDStv Premiership njengoba kuqhwakele amaSandawana kuthi i-AM ilale isibili.
I-AM idlulele kulesi sigaba ngokuqumba phansi i-University of Pretoria ngo-3-2 kwi-quarter final izolo eChatsworth kanti iDowns inike izifundo zamahhala zikanobhutshuzwayo iSummerfield Dynamos iyibhudluza ngo-5-0 ngo- Mgqibelo ePretoria. UManqoba “TV” Mngqithi ololonga iSundowns usanda kutshela ILANGA ukuthi iphupho labo elikhulu kule sizini wukunqoba izindebe ezintathu (i-treble). Le kilabhu iyiqale kahle isizini idla ubhedu kwiMTN8 njengoba isikumasemi final eNedbank Cup ekubeni ivule negebe lamaphuzu angaphezulu kuka-10 esicongweni seligi okwenza abe makhulu amathuba okuthi iyivikele.
Ngaphandle kwalezi zicoco zakuleli, iDowns ikuma-quarter final eCaf Champions League njengoba isembhidlangweni wokunqoba lesi sicoco okwesibili emlandweni emuva kokusidla okokuqala ngo-2016 isacijwa nguPitso “Jingles” Mosimane oselolonga i-Al Ahly yase-Egypt evikela lesi sicoco. Ne-Al Ahly isisesigabeni esifanayo salo mqhudelwano. Uma i-AM ingakwazi ukushaya iDowns iqhubeke inqobe iNedbank Cup, ingamela elakuleli kwiCaf Confederations Cup ngesizini ezayo. Kule sizini iGallants yiyona ebimele elakuleli kulo mqhudelwano ngokunqoba lesi sicoco ne-Orlando Pirates ngokuqeda ihlezi endaweni yesithathu kwiligi.
IGallants seyaphuma kanti iBucs isikuma-quarter final. Ukubuyela emdlalweni we-AM neTuks, izihambi yizona ezibone kuqala imbobo yamapali ngesikhathi uWonderboy Makhubu eshaya amagoli amabili ngomzuzu ka-19 nangoka-27 ngaphambi kokuba uVictor Letsoalo aphendule ngawakhe amabili ngoka-57 nangoka-78 kwathi elokunqoba le-AM leza noMfundo Thikazi ngemuva kokuthola iphasi exoxa indaba kuSedwyn George ngoka-94. USamuel Julies weTuks ube ngumdlali wosuku wagoduka no-R5 000. Lo mdlali ukhale ngesimo senkundla ebimanzi eyenze kwanzima ukudlala ngokukhululeka. UJohn Maduka ololonga i-AM uthe bawubheke ngabomvu umdlalo neSundowns edlala ibhola sengathi iyazijimela nje. Isiyonke imiphumela yama-quarter final eNedbank Cup imi kanje: Royal AM 3, University of Pretoria 2; Sundowns 5, Summerfield Dynamos 0; Gallants 1, Baroka FC 0; TTM 3, SuperSport 2.
Previous articleUdalula imfihlo yesnemfu onqobe izigidi kwiBig Brother
Next articleBakhala ngemenenja ‘enyamalele’